Xiddiga xulka Brazil u xiran doona lambarkii 10-aad ee Neymar oo la shaaciyey & Shan waxyaabood oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato – Gool FM
Xiddiga xulka Brazil u xiran doona lambarkii 10-aad ee Neymar oo la shaaciyey & Shan waxyaabood oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato
(Rio) 23 Maarso 2019. Xulka qaranka Brazil ayaa ku dhawaaqay in laacibka khadka dhexe ee kooxda AC Milan, Lucas Paqueta loo gacan geliyey lambarkii 10-aad ee sida joogtada ah uu xulka ugu xiran jiray Neymar Jr, madaama uu shaxda xulka dhaawac ku seegayo.
Macallinka xulka qaranka Brazil ee Tite ayaa ku dhawaaqay liiska xiddigaha xulkiisa ee la kala ciyaari doona xulalka Panama iyo Czech Republic.
Xulka South America ayaa marti-gelin doona caawa oo Sabti ah xulka Panama, ka hor inta aysan u safrin Yurub halkaasoo ay saddex maalmood kaddib kula soo ciyaari doonaan Czech Republic.
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Neymar ayaan ka soo muuqan shaxdan waxaana uu awoodi waayey inuu soo laabto maadaama uu qabo dhaawac cagta ah, waxaana uu seegi doonaa kulamada uu xulkiisa Brazil ciyaari doono, macallin Tite ayaana go’aansaday inuu lambarkii Neymar ee 10-aad ku taago laacibka khadka dhexe ee AC Milan, Paqueta.
Haddaba halkaan hoose ka eeg shan waxyaabood oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato laacibkan Lucas Paqueta ee loo dhiibay lambarkii 10-aad ee Neymar Jr.
Waa kuma Lucas Paqueta? Ka ogow shan waxyaabood….
>- Da’diisa: Waa 21 sano jir waxaana uu dhashay (27/08/1997)
>- Booska uu ka ciyaaro: Waxa uu ka dheelaa booska khadka dhexe.
>- Xirfaddiisa sare kooxaha uu u ciyaaray: Waxa uu u soo dheelay kooxaha Flamengo iyo AC Milan.
>- Wadar ahaan kulammada uu saftay xirfaddiisa ciyaareed ee sare: waa 108 kulan.
>- Furaha xaqiiqadiisa: Waxaa lagu abaal-mariyey the Bola de Ouro (Golden Ball) oo uu ka helay Brazilian sports magazine, waxaana uu ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiican Brazilian Serie A sanadkii 2018.
HALKAAN HOOSE KA EEG SIDA AY XIDDIGAHA XULKA BRAZIL U KALA XIRAN DOONAAN LAMBARRADA:-
Muxuu kala jeeday dabaal-deggii uu xalay sameeyey Raheem Sterling markii uu goolka labaad ka dhaliyey Czech Republic??